Madaxweynaha JFS Oo ka mid Ahaa Musharixiintii Gudoomay Shahaadada Xilka Musharaxnimada madaxweynaha Dalka
Monday May 09, 2022 - 23:28:37
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta qaatay shahaadada musharaxnimo ee doorashada Madaxweynaha Somalia ee 15ka bishan lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Diiwaan-gelinta ka dib Farmaajo ayaa qoraalka hoose soo dhigay baraha bulshada kaasoo ku bilowday sidatan.
''Waxaan Guddiga Isku-dhafka ah ee Doorashada Madaxweynaha si rasmi ah uga guddoomay, shahaadada musharaxnimo ee xilka Madaxweynaha JFS annIgoo u gudbinay barnaamijkeenna siyaasadeed ee ku wajahan sii amba qaadidda isbeddelka socda ee dalka iyo qorsheyaashii horumarineed ee miro-dhalay''.
Maxadweyne farmaajo ayaa yiri Waxaan ku kalsoonahay garashada iyo aqoonta ay u leeyihiin sharci dejiyeyaasha Soomaaliyeed in ay dalka u doorayaan hoggaan la hubo, oo ku tilmaaman ilaalinta ammaanada iyo qarannimada, kana tarjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee u taagan horumarinta dalka iyo adkaynta dowladnimada.
Waxaan Alle ka baryayaa in uu dalkeenna ku gallado horumar iyo xasillooni, annagana na waafajiyo sii ambaqaadidda isbeddellada horumarineed ee ka socda dalka.